ဘဝတစ်ခုလုံးလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင် အချစ်တော့ရှိစေချင်တယ် - အောင်လ- ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - MyanmarMagazine
ဘဝတစ်ခုလုံးလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင် အချစ်တော့ရှိစေချင်တယ် - အောင်လ- ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
ဘဝတစ်ခုလုံးလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင် အချစ်တော့ရှိစေချင်တယ် - အောင်လ
အခုက ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချစ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘဝလို့ ယုံကြည်ပါတယ် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
ကလောင် - မေသက်
အသုံးတော်ခံဆိုတဲ့ တတိယ ခွေကို Online နဲ့ ရုပ်သံလိုင်းများ မှာ Free to air ထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိ ပြီး စတုတ္ထအခွေ Idiots Big Bag Reason အနေနဲ့လည်းထွက်ဖို့ရှိနေ တဲ့ အောင်လကို ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့တွဲ ပြီး 8days Cover ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ ဝိုင်းစု Show ဆိုတဲ့နောက်လိုက်ပြီး ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ပျော်နေပါ တယ်။ သူ့မှာ ပရိသတ်လည်း အများ ကြီးမရှိဘူး။ ရှိတဲ့ပရိသတ်တွေက လည်း သူ့ကိုနားလည်ပါတယ်လို့ ဆို ပါတယ်။
Q. နှစ်ယောက် ပြန်လက်တွဲဖို့ ဘာတွေက တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့လဲ။
အောင်လ - အဓိက အချစ်ပဲ ဗျ။ သူနဲ့က ဟိုးအရင် အိမ်ထောင် တွေမကျခင်တုန်းက ကြိုက်ခဲ့ကြဖူး တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူလည်း သူ့ဘဝနဲ့ သူ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ အဆက်အ သွယ်ပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ ခုပြန် လက်တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း အချစ်ကြောင့်ပါပဲ။
Q. နှစ်ယောက်စလုံး အိမ် ထောင်တွေရှိလျက်နဲ့ စည်းမစောင့် ဘူးလို့ပြောကြတဲ့အပေါ်မှာရော..
အောင်လ - ကျွန်တော်တို့နှစ် ယောက်ကြားထဲမှာ ဘာအဆက်အ သွယ်မှမရှိဘူး။ ပြန်တွဲကြတာက လည်း Official လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးမှ ပြန် တွဲခဲ့ကြတာ။ ကျွန်တော့်အိမ်ထောင် ရေးမှာ အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းတွေ ရှိသလို သူလည်း သူ့ဘာသာအဆင် မပြေတာတွေရှိတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က အဆင်မပြေတဲ့ Life ကြီး ကျွန်တော် ရှေ့မဆက်ချင်ဘူး။ ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဏူညေ တွေ လည်းရှိတယ်။ Music ကိုစွန့်လွှတ် ပြီးလည်း ထွက်မသွားနိုင်ဘူး။ ဘဝ တစ်ခုလုံး လက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြမယ် ဆိုရင် အချစ်တော့ရှိစေချင်တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ သံယောဇဉ်တွေ နား လည်မှုတွေပါလာမယ်။ အိမ်ထောင် ပြုပြီးပြီဆိုရင် နှစ်ယောက်သားက အတူတူနေဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ အချစ်တွေမလျော့သွားဖို့ ပိုအရေး ကြီးတယ်။
Q ခုက ပျော်ရွှင်ပြီး အချစ် တွေရှိတယ်လို့ ယုံကြည်လား။
အောင်လ - ခုက ပျော်ရွှင် စရာကောင်းတဲ့အချစ်တွေပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ဘဝလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Q. Social Media ကို ဘယ် လိုမြင်လဲ။
အောင်လ - ကျွန်တော်က တခြား Page တွေ သူများတွေရေး တာတွေဖတ်လေ့မရှိဘူး။ အရင်က အဲဒါတွေလိုက်ဖတ်တဲ့အခါ ကိုယ့် အလုပ်ထိခိုက်တယ်။ သီချင်းဆိုရင် Mood မကောင်းဘူး။ အဲဒီတုန်းက Facebook လုံးဝမသုံးဘဲနေလိုက် သေးတယ်။ Show တွေဆိုရတာ ကောင်းလာတယ်။ ကိုယ့်ဆဲနေတာ တွေ မသိရ၊ မမြင်ရဘူးလေ။
Q. ဝိုင်းစုရော Social Media နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဝိုင်းစု - ခုလို Page တွေဖွင့် ပြီး ဟုတ်တာရော၊ မဟုတ်တာရော ရေးကြတာ။ Celebrity တိုင်းကို ရေးကြတယ်။ Celebrity တစ် ယောက်ကို အခက်တွေ့အောင်လုပ် တာထိတော့ မကောင်းဘူးလို့ထင်ပါ တယ်။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အကြောင်း နဲ့ကိုယ်ရှိတယ်။ ဝိုင်းစုမှာလည်းရှိ တယ်။ ဝိုင်းစုတို့ ဘာလို့လမ်းခွဲခဲ့ရ လည်းမသိဘဲ အပြစ်တွေပြောကြ တယ်။ ခုပြန်လက်တွဲတယ်ဆိုတာ လည်း ဝိုင်းစုတို့နှစ်ယောက်လုံး တရားဝင်ရှင်းပြီးမှတွဲကြတာ။ အိမ် ထောင်ရှိနေရင်း ဖောက်ပြန်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ အတိအကျမသိဘဲ ထင်ရာရေးတော့ ပရိသတ်အထင် မှား အမြင်မှားဖြစ်တယ်။ အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ် အချစ်လျော့တာပေါ့။ အဲဒီလိုတွေ မလုပ်စေချင်ဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာစေ ချင်တယ်။ သတင်းမှန်ဆိုရင်တင်ပါ။ လုပ်ကြံပြီးရေးတာမျိုးက ဘယ်သူ မဆို ထိခိုက်တယ်။
Q. ဘာကြောင့် လမ်းခွဲခဲ့ကြ တာလဲ။
ဝိုင်းစု - လမ်းခွဲပေးခဲ့ရတာတွေ ပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ခုချိန်မှာ ဝိုင်းစုချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်တွဲပြီးရှေ့ ဆက် အနုပညာအလုပ်တွေလုပ် မယ်။ ဝိုင်းစုကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေ ရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှိ တယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ ဝိုင်းစု ရှေ့ဆက်မယ်။
Q. သူ့သီချင်းတွေ နားမ ထောင်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ Comment မျိုးတွေဖတ်မိရင်ရော။
ဝိုင်းစု - ဝိုင်းစုက ဝိုင်းစုအား ပေးသူတစ်ယောက်ရှိနေရင် အဲဒီ တစ်ယောက်အတွက် သီချင်းဆိုနေ မယ်။ ဝိုင်းစုဘာပဲလုပ်လုပ် လက်ခံ တာ၊ လက်မခံတာ သူတို့အပိုင်းပေါ့။ ပရိသတ်လက်ခံနေသရွေ့ ဝိုင်းစု ကြိုးစားနေဦးမယ်။
Credit : 8 DAYS ဘဝတစ်ခုလုံးလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင် အချစ်တော့ရှိစေချင်တယ် - အောင်လ- ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း